SWEDEN: Maxaa sabab u ah in Somali badan u geeriyooto cudurka COVID-19? - Horseed Media • Somali News
March 26, 2020Featured
SWEDEN: Maxaa sabab u ah in Somali badan u geeriyooto cudurka COVID-19?
sawirka: Anders Wiklund/TT
Somalidoo ka ah 0.4% shacabka Sweden iney 29% ka noqdaan geerida COVID 19, maxaa u sabab ah?
Heyadda la yiraahdo Sweden Statistics waxey qortay in Somalida deggan Sweden tahay 63,853 (2016). Waxaa rag ah 20,554, dumarna 20,781.
Shacabka ku nool Sweden waa 10 malyan iyo bar. Somalidu waxey ka tahay tiradaasi 0.4% (boqolkiiba dhibic afar). Waa in ka yar boqolkiiba hal qof. Sida kale haddii loo dhigo: 300 qof oo Sweden ku nool, 1 qof ayaa Somali ah.
Aannu eegno tirada ku dhimmatay cudurka COVID19. Waxaa ilaa hadda la hubaa in tirada u dhimmatay xanuunkaa tahay 12 qof (AUN). Guud ahaan inta la soo tebiyey bishan Maarso in dalka Sweden u lee’atay COVID 19 tahay 42. Taa waxey tuseysa in Somalidu tahay boqolkiiba 29 dadka u geeriyooday COVID 19 bishan.
Waxaa la tilmaammayaa in goleyaasha lagu ururo sida maqaayadaha, sentarrada, iyo masaajidda loo nisbeynayo isqaadsiinta ku badan Somalida dhexdeeda.
Somalidu waxaa ku badan dad jecel bulshada wada jirta, sheekada iyo qaxweeynta fadhiga dheer. Taa waxaa ka dhalanaya isu gudbinta Corona virus. Salaanta iyo is marxabbeeynta badan. Xabadkoo la isa saaro. Gacantoo la is geliyo. Sheeko dheer iyo wax wadaag badan. Waxaasoo idil waa sida ugu fudud oo uu ku faafo Corona Virus.
Shaqsi kasta oo ku nool Sweden oo Somali ah badanaa waxaa laga helaa meelaha Somalidu ku kulanto. Sabtida iyo Axaddana waa rug loo soo sheeka doonto. Buuq iyo bulaan iyo sheeka ah mid siyaasadeed, mid kubbad, mid diini iyo mid ganacsi ah meeshaa lagu hayaa. Waa goob madaddaalo iyo caweys iyo qorshe ganacsi iyo cibaado. Haddoo lagu jiro xilli halis ah, waa meel in laga fogaado mudan.
Haddaba, waxaa habboon oo waajib ah in lagu negaado guryaha. Haddaad tagto goleyaashaa oo uu xanuunkaa ku soo raaco, waxaa fudud inaad qaadsiiyo waayeelka iyo carruurta joogta guryaha, rag iyo dumar, wiilal iyo gabdho, oo aan laheyn adkeysi badan.
JOOG GURIGAAGA. BADBAADI EHELKAAGA IYO BULSHADA AAD LA NOOSHAHAY.